:: My Little World ::: July 2006
How To Use Ant To Hack Music
ကျွန်မ သီချင်းနားထောင်တာ ကြိုက်တာကို သိတဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အီးမေး ပို့ ပြီး internet က သ်ီချင်း download လုပ်ပုံ လုပ်နည်း လေးတစ်ခု ပြောပြပါတယ်။
Internet မှာ သီချင်းတွေ နားထောင်တဲ့ အခါ တစ်ချို့site တွေမှာ ဘယ်နေရာမှာ အဲ့ဒီ သီချင်းတွေ သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ Link တွေ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်မတို့ ဟာ အဲ့ဒီ လို Link တွေရှာပြီး Link ကို right click နှိတ်ပြီး save လုပ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ download manager software တွေ သုံးပြီး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သီချင်းကို download လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ် အမြဲတမ်းတော့ အဲ့ဒီလို download လုပ်လို့မရပါဘူး။ တစ်ချို့site တွေက သူတို့စီကနေ သီချင်းတွေကို download လုပ်ယူကြမှာ စိုးလို့ security ကောင်းအောင် လုပ်ထားတဲ့ အတွက်၊ ရှေ့ ကပြောထားတဲ့ နည်းတွေ သုံးပြီး download လုပ်ရင် မရပါဘူး။ အဲ့လို အခါတွေမှာ သူပြောတဲ့ နည်းကို သုံးပြီး download လုပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းက ပြောပါတယ်။
ကျွန်မ က လည်း စပ်စပ်စုစု သမားဆိုတော့၊ ဘယ် ဒီအတိုင်း နေပါ့လဲ။ သူစီက နည်းသိတာနဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်တော့ စမ်း လုပ်ကြည့်အုံးမှ ဆိုပြီး download လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ မဆိုးပါဘူး၊ download လုပ်လို့ရသားပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်၊ သူပေးတဲ့ နည်းက တစ်ခါမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပဲ download လုပ်လို့ရပါတယ်။ အင်း.... သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ပြီး တစ်ခြားနေရာက download လုပ်လို မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းကို သုံးပြီး download လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ မဟုတ်ရင် တော့ သုံးဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။
နောက်ပြီးရှိသေးတယ်။ တော်ရုံ IT knowledge မရှိတဲ့ သူကတော့ အဲ့ဒီနည်း နဲ့သီချင်းရှာ download လုပ်ချင်မယ် မထင်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်မ ဒီပိုစ့် ရဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ တင်ထားသလို သ်ီချင်း donwload လုပ်တာ က ant ကို သုံးပြီး လုပ်ရမှာ လေ။ ပထမဆုံး ant ဆို တာ ဘာလဲ၊ သိဖို့ လို သေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ ant ဆိုတာ ပုရွက်ဆိတ် ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ Apache Ant ကိုပြောတာပါ။ java နဲ့တွဲသုံးတဲ့ tool တစ်ခုပါ။ ကျွန်မ စိတ်ထင် Java Porgramming လုပ်နေတဲ့ သူတွေတော့ ant ကို သိကြမယ်၊ သုံးဘူးကြမယ် နဲ့တူတယ်။ ant ဘာလဲ ဆိုတာ သိရုံနဲ့မရဘူး၊ အဲ့ဒီ ant ကို ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ မရှိရင် ရှိအောင် ဒီ Apache Ant Site မှာ download လုပ်ပြီး၊ install အရင် လုပ်ရဦးမယ်။ ပြီးရင် setting တွေလုပ်ရအုံးမယ်။ ဒီဟာတွေ လုပ်ပြီးမှ သီချင်း download လုပ်တာကို စမ်းလို့ရမှာပါ။ ဒီ download လုပ်နည်းကို စမ်းကြည့် ချင်လို သိချင်တာများရှိရင် ကျွန်မ ကို မေးလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မ သိတာတွေဆို ရှင်းပြ ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ant က အစဉ်သင့်ရှိ နေတော့ ဒီနည်းကိုသုံးပြီး donwloal လုပ်ဖို့က မခက်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့၊ သီချင်း ရှိနေတယ့် link တွေကို တော့ လိုက်ရှာ ရတာပေါ့။ ဒါလည်း သိပ် အလုပ်မရှုပ် ပါဘူး၊ ကျွန်မ က အားရင် သီချင်း download လုပ်ဖို့link တွေ လိုက်ရှာ နေကြပါ။ ရှာနေကြ ဖြစ်သွားတော့ ဘယ်လို ရှာရမလည်း နည်းနည်း ပိုသိ လာ သလိုပဲ။ စပြီး ရှာ ခါစ ကတော့ တော်တော်လေး ခေါင်းမူးအောင်ရှာ ရပါတယ်။ ဘယ် အလုပ်မဆို လုပ်ကျင့်ရှိ သွားရင် နည်းနည်း တော့ လွယ်သွားမယ် ထင်တာပဲ။
ဒီနည်းကို သုံမယ်ဆိုရင် file နှစ်ခု လိုပါတယ်။ build.properties နဲ့build.xml တို့ ပါ။ build.xml ကတော့ တစ်ခါ ရေးပြီးရင် ထပ်ပြီး ပြောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ် build.properties ကတော့ သီချင်းရှိတဲ့ link ကို လိုက်ပြီး လိုအပ်တာတွေ ပြောင်းပေးရမှာပါ။ အောင်မလေးနော်..... တစ်ခုချင်းစီသာ လိုက်ရှင်း နေရ ရင် တော့ ပြီး တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မ ခုဏ က စမ်းပြီး download လုပ်တုန်းက သုံးတဲ့ file တွေကို အောက်က link မှာ donwload လုပ်ယူပြီး ကိုယ်ဟာကို စမ်းချင်ရင် စမ်းကြည့် ကြပါ။
AntMusic Download Here
၁။ ant ကို install လုပ်၊ လိုတဲ့ setting တွေ လုပ်ပါ
၂။ ကျွန်မရဲ့ zip file ကို unzip လုပ်လိုက်လို ရလာတဲ AntMusic folder ကို C:/ အောက်ကို ရွေ့လိုက်ပါ
၃။ command prompt window ကို ဖွင့်ပြီး C:/AntMusic/ အောက်ရောက်အောင်သွားပါ။
၄။ C:/AntMusic> ကို ရောက်ပြီဆို ရင် ant လို့ရိုက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို သူ့ အလို လို သီချင်းကို download လုပ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ download လုပ်လို့ပြီးသွားရင် BUILD SUCCESSFUL ဆိုတဲ့ commond ကို တွေ့ ရမှာပါ။ ကွန်နက်ရှင်ပေါ်လိုက်ပြီး ၂ မိနစ် က နေ ၆ မိနစ်လောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို စမ်းကြည့် ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လို ထင်လည်းဆိုတာလေး ပြန်ပြောပြကြပါဦး။ ပြောသာ ပြောရတာ ဘယ်သူမှ စမ်းကြည့် ကြမယ် မထင်ဘူး။ download လုပ်တာမ ပြောနဲ့ဒီပိုစ့်ကို ရိုက်ရတာတောင် တော်တော်ပင်ပန်းသွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီနည်းကို ပြောပြတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခု တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ လိုတာရှိ နောက်မှ ထပ်ရေးတော့မယ်။
Labels: Download, Music, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 7/31/2006 12:44:00 PM 1 comments
Just launched New Gtalk 1.0.0.95
New Gtak Version 1.0.0.95 just launched with the following new features.
3. Music Status
For more information, you can read here and you can download new gtalk from following link.
Get New Gtalk SetUp
မနေ့ က gtalk အသစ်ထွက်ပြီဆိုလို့ကျွန်မ gtalk web site မှာ သွားပြီး download လုပ်တာ၊ မရ ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်မှ THKZ က gtalk အသစ် ဒီမှာ download လုပ်ဆိုပြီး လင့်ခ်တစ်ခု ပေးတာနဲ့သူပေးတဲ့ လင့်ခ်မှာ သွား download လုပ်မှ ပဲရတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။ gtalk အသစ်ထွက်ပြီဆိုတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသစ်ကို သုံးကြည့်ချင်တာပေါ့။ download လုပ် လို့ မရလို စိတ်ညစ်နေတာ။ ခုတော့ gtalk အသစ်နဲ့မစဉ်ပြေ နေပြီ။ အစက ဘလောခ့်မှာ မတင်တော့ဘူး စိတ်ကူးနေတာ၊ နောက်မှ တစ်ခြားသူတွေလည်း ကျွန်မလို download လုပ်လို့မရဖြစ်ချင် ဖြစ်နေကြမှာလို့စဉ်းစားမိလို့ ၊ ဒီမှာ တင်ထားလိုက်တာပါ။
Labels: Download, News, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 7/29/2006 03:04:00 PM3comments
Busy - July 2006 (Last Week)
ဒီနေ့အလုပ် ကို ရောက်ရောက်ခြင်း လုပ်ဖြစ်တာက မြန်မာ ဘလောခ့်တွေ လိုက်ဖတ်တာပါ။ ဟီး ဟီး။ အလုပ် အရမ်း ကြိုးစား နေတာလေ။ ဒီတစ်ပတ်လုံး အလုပ် အရမ်း ရှုပ်နေတယ်။ အလုပ်က နှစ်ရက်တောင် ခွင့်ယူထားတာ၊ ဒီနေ့ မှ အလုပ်ပြန်ဆင်းရတာတောင် လုပ်စရာတွေက ကျန်နေတုန်းပဲ။ နှစ်ရက် ခွင့်ယူထားတာ ဆိုတော့ အလုပ်မှာ လည်း လုပ်စရာတွေ က အများကြီး ဖြစ်နေလောက်တယ်။ ခုထိတော့ အလုပ် အီးမေး မစစ်ရသေးဘူး။ ကြည့်လိုက်ရင် လုပ်ဖို့ဟာတွေ တွေ့ မှာစိုးလို့၊ ဒါလေး အရင် ပိုစ့်လုပ်ပြီးမှ ကြည့်တော့မယ်။ လုပ်စရာတွေ အရမ်း မမျုားပါစေနဲ့ ။ အလုပ်များရင် မနက်ဖြန် အလုပ်လာရမှာ။ စနေ နေ့အလုပ် မလာချင်ဘူး။ ဒီ အပတ် အိမ်မှာလည်း လုပ်စရာတွေရှိ သေးတယ်။ နောက် တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ အားလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။
Posted by Nay Nay Naing at 7/28/2006 04:28:00 PM0comments
မနေ့ ညက၊ ကျွန်မ ကွန်ုပြူတာတွေကို ဖွင့်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မကို ကျွန်မ မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပြီး၊ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင် မှတ်ထားတဲ့ သဘောနဲ့ရေးမှာပါ။
လိုအပ်လို့့ ဖွင့်ကြည့်ရတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ ကွန်ုပြူတာတွေမှာ ဘာတွေပါလဲ တိတိကျကျ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သိရအောင်၊ လိုတာရှိရင် တိုးလို့ရအောင်လို့ ပါ။
အရင်တုန်း က ဖွင့်ကြည့်ဘူးလား
ဒါ ပထမဆုံးပဲ။ အရင်က ဖွင့်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူး မရှိခဲ့သလို၊ ဒါတွေဟာ ကျွန်မ အလုပ်လို့ လည်း မယူဆ ခဲ့ဘူး။
အရင်က ကွန်ပြူတာ ပျက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆို ဘယ်လို လုပ်လဲ
ရှင်းနေတာပဲ။ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်လေ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ဖုန်းတချက် ဆက်လိုက်၊ အားတဲ့ သူလာလုပ်ပေးတယ်။
ဘာလို့ဒီတစ်ခါ သူတို့ ကို မလုပ်ခိုင်းပဲ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာလဲ
သူကပြောတယ်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်တာတွေကို ကိုယ်တိုင်သာလုပ်ပါ၊ သူတစ်ပါးကို အားမကိုးပါနဲ့ ၊ မကြိုက်ဘူး၊ လိုအပ်တာတွေ၊ မသိတာတွေကို သူရှင်းပြမယ် ဆိုလို့ ပါ။ ကြောက်ရတယ်လေ။ ဟီး ဟီး။
ခု သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ ရှိနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ
တစ်လုံးက ၂ နှစ်ကျော်ရှိပြီ။ နောက်တစ်လုံးက တော့ ၁နှစ်ကျော်၊ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ ထင်တယ်။
ဒီလောက်ကြာ ကြာသုံးနေတာ တောင် ကိုသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြုတာမှာ ဘာတွေ ပါလည်း မသိဘူးလား
တစ်လုံးမှာ ဘာတွေပါလည်း နည်းနည်းသိတယ်။ အဲ့ ဒီကွန်ပြူတာက ကိုယ့်ဟာကို ဆင်ထားတာမို့လို့နည်နည်း သိတာ။ နောက်တစ်လုံးကို တော့မသိဘူး။
ကျွန်မက ကွန်ပြူတာဆို မြန်နေရင်၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လို ရ နေရင်၊ ကျန်တာတွေ စိတ်မဝင်စားတော့ ဘူးလေ။ စက်က နှေးနေရင်တော့ အားကြီး စိတ်ဆိုးတယ်။
ကွန်ပြုတာကို ကိုယ့်ဟာကို ဆင်ရတာ ကြိုက်လား။ အစဉ်သင့် ဆင်ပြီးသား ဝယ်သုံးရတာ ကြိုက်လား။
ခုထိတော့ ကိုယ်ဟာကို လိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဝယ်ပြီး ကိုယ်ဟာကို ဆင်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ဟာကို ဆင်တော့ ကိုယ်လို ချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ပိုကောင်းအောင်ဝယ်ပြီး၊ သိပ်မလိုဘူး ထင်တဲ့ နေရာမှာ လျှော့လိုက်လို ရတာကို ကြိုက်တယ်။ ကျွန်မက game ကစားချင်တော့ graphic card ကို ဂရုစိုက်တယ်။ မြန်တာလိုချင်တော့ memory ကို ကိုကြိုက်တာ ထဲ့တယ်။ ခု ပိုက်ဆံ မရှိသေးလည်း၊ နောက်ကြရင် ဘာတွေ တိုးထဲ့မယ် စဉ်းစားပြီး၊ တိုးချင်ရင် တိုးလို့ ရတာ မျိုးဝယ်ချင်တယ်။
ကွန်ပြူတာဆို အလုံးလိုက် ဆင်ပြီးသား ဝယ်ရတာမကြိုက်ဘူး။ ဈေးကြီးတယ် လို့ ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တာမရဘူးလားလို့ ။ ပိုက်ဆံကလည်း သိပ်မရှိဘူး။ ဆင်ပြီးရောင်းတဲ့ ဟာမှာ လိုချင်တာတွေ ထပ်တိုးလိုက်ရင် ဈေးက၊ ကိုယ်သုံးနိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ အရမ်းကွာကွာ သွားတယ်။ အဲ့ဒါမို့မကြိုက်ဘူး။
မနေ့ညကဖွင့် ကြည့်တော့ ဘာတွေ တွေ့ လဲ
ကျွန်မ အဓိက သိချင်တာက ဘယ်လို ဟာတွေ သုံးထားလည်း သိချင်တာပါ။ တစ်ချို့ဟာတွေက ပုံးကြီး မဖွင့်ပဲ သိနိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ ဟာတွေကြတော့ ဖွင့်ကြည့်မှ သိမှာ မို့ လို ကြည့်ကြည့် လိုက်တာ။ လုပ်ဘူးတယ်လည်း ရှိ အောင်ပေါ့ ။ ကြည့်လိုက်မှ ကွန်ပြူတာ နှစ်ခုလုံးက တော်တော်များ များတူနေတာတွေရတယ်။ အရင် က မသိဘူး။
- Genuine Intel(R) Desktop Board D865PERL ( Intel 865PE chipset, Five PCI slots , STAT1502ports ,4Dual_Channel DDR DIMM sockets )
- Processor - Intel(R) Pentium(R)4CPU 2.80GHz
- HardDisk 1 - 120 GB SATA
- Memory 1 - 512MB - PC3200 DDR (DDR400) (1 slot is using and3free slots )
- Graphic - NVIDIA Gforce FX 5200 128MB
- CD R/W
- Processor - Intel(R) Pentium(R)4CPU 2.40GHz
- HardDisk 1 - 80 GB SATA
- HardDisk2- 80 GB SATA
- Modem - Compaq Data Fax Modem
ဒါတွေ သိပြီးတော့ ဘာဆက်လုပ်မယ် စိတ်ကူးလဲ
memory တော့ ထပ်တိုးမယ်။ ဘယ်လို ဘယ်လောက် တိုးမလဲတော့ မစဉ်းစားရသေးဘူး။ ကျန်တာတွေက တော့ အဆင်ပြေနေတယ်ထင်တာပဲ။ ကြည့်အုံးမယ်လေ။ တော်ပြီ ဆက်မမေးနဲ့ တော့၊ မဖြေတတ်တော့ဘူး။ နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှ ပြန်မေးတော့။ ခု ဘာလုပ်မယ် မစဉ်းစားရသေးဘူး၊ မအားသေး ဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 7/26/2006 12:46:00 AM4comments
တစ်ကိုယ်ရေ နေထိုင်မှု့ ၏ အားသာချက်များ
ဒီနေ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် စီက တဆင့်ပြန်ပို့ တဲ့ email တစ်စောင်ရပါတယ်။ အပျိုကြီးများ၏ အားသာချက်များဆိုတဲ့ email ပါ။ တစ်ချို့အချက်တွေက အမျိုးသမီးတွေ ဘက်က ရေးထားတာပါ။ အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးတွေဘက်က ရေးထားတာ အများစုကို ကျွန်မ သဘောမတူပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ မမှန်ဘူးထင်တာတွေကို မရေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ဟာတွေကတော့ ယောက်ျား၊မ်ိန်မ ယူမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရည်းစာ ဘဝ မှာထဲက မှန်နေတယ်ထင်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချက်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်။
ဘာလို့လည်းတော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်မနဲ့အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတချို့ က အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး လုပ်မယ် အမြဲပြောလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး လုပ်မယ် ပြောနေသော သူငယ်ချင်း တွေ ကို ဘာလို့အပျိုကြီးလုပ်ချင်ရတာလည်း ၊ ဘာလို့လူပျိုကြီး လုပ်ချင်ရတာလည်း မေးတာခံရတဲ့ အခါ ဒီထဲက တစ်ချို့ဟာလေးတွေကို အဖြေအဖြစ် အသုံးပြုနိုင် အောင်လို့ကူညီတဲ့ သပေါနဲ့ဒီမှာတင်ပေးတာပါ ။ ဟီး ဟီး။
၁။ စိတ်ထဲရှိသလို နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင် နိုင်သဖြင့် လွတ်လပ်မှုရှိုခြင်း
၂။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို စောင့်ကြည့်၊ စိတ်ပူ နေစရာ မလိုခြင်း
၃။ မည်သူနှင့် မျှ စကားမပြောလိုပဲ တစ်ကိုယ်တည်း တိတ်ဆိတ်စွာ နေလိုပါက နေခွင့် ရခြင်း
၄။ သွားချင်ရာသွား၊ စာချင်ရာစား၊ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
၅။ ညဘက်တွင် ကိုယ်အိပ်ချင်သည့် အချိန်မှ အိပ်ရာဝင် နိုင်ခြင်း
၆။ မိမိ ယုံကြည်ရာ၊ ပြောလိုရာကို ပြောလိုသူနှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ခြင်း
၇။ မိမိစိတ်မဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာများကို လိုက်ပါ စိတ်ဝင်စား နေစရာမလိုခြင်း
၈။ မိမိ နှင့် မရင်းနှီးသူများကို ပြုံးပြ၊ နှတ်ဆက်၊ လိုက်ရောညီထွေ ဆက်ဆံနေစရာ မလိုခြင်း
၉။ မိမိ မနှစ်သက်သော အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်၊ အသံဗလံများကို အထူးသည်းခံခွင့် လွတ်နေစရာ မလိုခြင်း
၁၀။ မိမိကို ထာရစ်ခဲ့မှာကို စိတ်ပူနေစရာ မလိုခြင်း
၁၁။ တစ်စုံတစ်ဦးကို တွေးတော၊ တမ်းတ၊ သတိရနေ စရာ မလိုခြင်း
၁၂။ မိမိငွေကြေးကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
ဒီထက် အများကြီးရှိအုံးမှာပါ။ အဲ့ဒီ email ထဲကတော့ ဒီအချက်တွေလောက်ပဲ နည်းနည်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး လုပ်တာမှာ ကောင်းတာတွေရှိ သလို၊ မကောင်းတာတွေ လည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီကိစက လူတိုင်းစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို ကျွန်မကတော့ ယူဆပါတယ်။ ယောက်ျား၊ မီန်းမ ယူချင်သူများက ယူကြပါ။ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး လုပ်ချင်သူများက လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး လုပ်ကြပါ။ သူတပါးကို မထိခိုက်ဘူးထင်ရင် ကျွန်မတို့ တွေ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ သပေါရှိ၊ မနောရှိ လွတ်လပ်စွာ နေနိုင်ကြတယ်လို ထင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/24/2006 03:14:00 PM6comments
My Cubicle - Song Lyrics
I sit in solitude.And sometimes I sit here nude.
အရမ်းရယ်ရတာပဲ။ *nude* ဆိုတာကလွဲရင် ကျန်တာတွေ အကုန်မှန်နေတယ်။ တစ်ခုပဲကွာတာက သီချင်းထဲမှာ ၈ နာရီက ၄ နာရီ၊ ဒီမှာက တော့ ၉ နာရီက ၆ နာရီ အထိနေရပါတယ်။
Thank THKZ for sharing this song.
Labels: Funny, Lyrics, Music
Posted by Nay Nay Naing at 7/23/2006 10:31:00 AM9comments
Than Lwin Ain Mat - Issue7
၁၉ ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ က သံလွင်အိမ်မက် အမှတ်(၇) ထွက်နေပြီးဆို တဲ့ email ရပါတယ်။ ဘာတွေများ ထူးထူးခြားခြားလေးတွေ လုပ်ထားမလည်း ဆိုပြီး ချက်ချင်း ဖတ်ကြည့် လိုက်မိတယ်။ သံလွင် အိမ်မက် အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေကို တွေ့ ရလို ဖတ်ရတာ ကျေနပ်မိပါတယ်။ သူတို့တွေကို ကျွန်မ တကယ်ပဲ ချီးကျူးပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုများ အလုပ်တစ်ဖတ်နဲ့ဒီလို သံလွင်အိမ်မက် ezine တွေ မှန်မှန်ထွက်နိုင်အောင် လုပ်ကြသလဲ။ ကျွန်မ လည်း ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့၊ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက် အလုပ်များတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန် ဘယ်လောက်ရှားတယ် ဆိုတာကို သိနေလို့ ပါ။ တကယ် လေးစားပါတယ်။ မအားတဲ့ ကြားကနေ ကိုယ်ရဲ့ အိမ်မက်တွေ ကို မရ ရအောင်ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖေါ်နေကြတဲ့ အတွက်ပါ။ အာပေးလျှက်ပါ။ ဒီထက်အောင်မြင်ကြပါစေ။
သံလွင်အိမ်မက်(ရ) ထဲက ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုက ကျွန်မကို တွေးစရာလေးတွေ ပေးသွားပါတယ်။ အဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းလေးတွေ တော်တော်လေး ပြန်မေးကြည့်မိတယ်။ အဖြေရတဲ့ ဟာလည်းရှိ သလို၊ ခုချိန်ထိ အဖြေမရသေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့မေးခွန်းတွေ အတွက် ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ အဖြေရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေပါတယ်။
ကျွန်မ ဘာတွေ တွေးမိလည်း ဒီနေရာမှာ ရေးပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ မရေးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖတ်ကြည့် တွေးကြည့်ကြပါ။ မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ကြပါ။
ကျွန်မပြောတဲ့ ဆောင်းပါးလေး က မောင်သစ်ဆင်း ရေးတဲ့ ကျောင်းကောင်း ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ် ။
ကျောင်းကောင်း - မောင်သစ်ဆင်း
Posted by Nay Nay Naing at 7/22/2006 03:12:00 PM 1 comments
@ 21 July 2006 ( Friday)
Posted by Nay Nay Naing at 7/22/2006 11:14:00 AM0comments
June Pay ( 18th July )
ဇွန်လ အတွက် လစာကို ဒီနေ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့ မှာရပါတယ်။ မဆိုးဘူး။ တစ်ခါတည်း နှစ်လခစာမှ ပေါင်းပေးတာမဟုတ်ပဲ ၊ ဇူလိုင်လမ ကုန်ခင် ဇွန်လစာကို ထုတ်ပေးလို့မဆိုးဘူးပဲ ပြောရမလား။ ပိုက်ဆံ ရှိနေရင် ကုန်အောင် သုံးပြစ်မှာဆိုးလို လဆန်းမှာ လခ မပေးပဲ၊ လကုန်ခါနီးမှ လခပေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ ကြန်ဖန်တင်တတ်ရင် တင်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
လခ ရပြီဆို မုန့် ဝယ်ကျွေးလို့လာမပြောကြပါနဲ့ ။ လခ ဆိုပြီး Giro နဲ့ ပေးတာမဟုတ်တဲ့ အတွက် Bank Account ထဲမှာ ပိုက်ဆံမဝင်သေးပါဘူး။ ဒီနေ့ ညနေ ၆ နာရီကမှ ဇွန်လခ ဆိုပြီး Cheque ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီနေ့တော့ Bank ကို သွားထဲ့ဖို့မမှီတော့ပါဘူး။ မနက်ဖြန်မှ ထဲ့လို့ရမှာပါ။ မနက်ဖြန် ထဲ့ရင် အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံကို သဘက်ခါ နေ့ လည် ၂ နာရီကျော်မှ သုံးလို့ရမှာပါ။ သဘက်ခါ ဆိုရက် ၂၀ ရှိပြီ။ အဲ့ဒီတော့ ပေးစရာ ရှိတာတွေ ပေးရပါတော့မယ်။
ပိုက်ဆံ ဝင်လာရင် ပေးစရာရှိတာတွေက
၁။ အိမ်လခ ( ၂ လစာ)
၂။ ရေဖိုး၊ မီးဖိုး ( ၂ လစာ)
၃။ ဖုန်း Bill ( ၂ လစာ)
ဒါဆို ရတဲ့ လခ ကုန်လောက်ပြီး။ နောက်လခ က ဘယ်တော့မှ ရမယ်မှန်း မသိဘူး ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကို အကုန် သုံးပြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ အိမ်ပြောင်းဖို့ ကလည်း ရှိသေးတယ်။ လခလို ရစရာ ရှိတာတွေသာ နောက်ကျတာ၊ မရတာ ရင်ချင်ရှိမယ်၊ ပေးစရာရှိတာ၊ ကုန်စရာရှိတာကတော့ နောက်ကျလို့ ၊ မပေးပဲနေလို့ မှ မရတာ။ အင်း.... ဒီလ လည်း မပေးချင်ပေမယ့် ပေးရမယ့် အားဓမခွန်ကို သွားပေးနိုင်ဦးမယ် မထင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ အားဓမခွန်က လည်း တစ်နှစ်ကျော်စာပေးဖို့ကျန်သေးတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို ရွှေပြည်တော်ရယ် မျှော်လေတိုင်း ဝေး ဆိုသလို ရွှေပြည်တော်ကြီးက ကျွန်မနဲ့ဝေးနေတုန်း၊ ဝေးနေအုံး မှာပါပဲ။
Labels: Day, Job
Posted by Nay Nay Naing at 7/19/2006 12:04:00 AM 1 comments
ဒီနေ့အလုပ်မှာ အဲ့ဒီသီချင်းလေးကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ဒီ သီချင်း စ ထွက်ခါစကတော့ တော်တော်လေးကို နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ရတာ ဘယ်လိုလေးမှန်းမသိဘူး။ အသံအရ ကောင်းမလေး သေးသေးလေးက "I am Big Big Girl" လို့ ဆိုနေတော့ တစ်မျိုးလေးပဲ။ ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနားထောင်ဖြစ်တာတော့ တော်တော်လေးကြာသွားပြီ။ ဒီနေ့ Web Site တွေ လျှောက်ကြည့်ရင်း ဒီသီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့ တာနဲ့ပြန်ပြီး နားထောင် ကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်သွားလို့လိုက်ရှာ Download လုပ်ထားလိုက်တာပါ။ မဆိုးဘူး ခုပြန်နားထောင်ဖြစ်တော့လည်း ကြိုက်တယ်၊ နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/18/2006 12:22:00 PM 1 comments
XEmacs and Vim (Editors)
ဒီနေ Text Editors နှစ်ခု install လုပ်ဖြစ်တယ်။ Editor နှစ်ခုလုံးကို တစ်ခါမှ မသုံးဘူး ပါဘူး။ နာမည် ကြီးတယ်၊ ကောင်တယ်လို့ပြောကြတယ် ဆိုလို install လုပ်ကြည့်တာပါ။ ဘာတွေကောင်းတာလဲ၊ တစ်ကယ်ရော ပြောသလောက် ကောင်းလို့ လား သိချင်လို့စမ်းသုံးကြည့် မလို့ ပါ။
ဒီမှာ ကျွန်မ ဒီနေ့install လုပ်ဖြစ်တဲ့ Editor တွေပါ။
အဲ့ဒီ Editor နှစ်ခုအကြောင်း ကို Wikipedia မှာဖတ်လို့ ရပါတယ်။
ဒီ Editor war ဆိုတာလေးကိုဖတ်ရင်လည်း Editor တွေအကြောင်း၊ XEmacs နဲ့Vim ရဲ့ အားသာချက်တွေ ကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ပြောပြချင်တယ်။ ကျွန်မ ဟာ ကျွန်မဆို ဒါတွေကို ဖတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ က ငပျင်း လေ။ ဖတ်ခိုင်းတဲ့ သူရှိလို့ ၊ ဖတ်စရာ Link တွေကို အသင့်ရှာပေးလို့ သာ ကျွန်မ ဒါတွေကို ဖတ်ဖြစ်တာပါ။ ဒီလောက်တောင် အဆင်သင့် လေ့လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးပါရဲ့နဲ့ကျွှန်မ က မဖတ်ဘူး၊ မလေ့လာဘူဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်သင်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/17/2006 10:49:00 AM0comments
ကျွန်မ ဒီ Blog ကို မြန်မာလို ရေးမယ် စပြီးစဉ်းစားတော့ ကျွန်မကို ကျွန်မ ဘယ်လို နာမ်စား သုံးရေးရင်ကောင်းမလဲ လို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ English လိုရေးရတာက ရှင်းပါတယ်။ English လိုမှာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးစရာ နာမ်စားဆိုလို့"I" တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ခေါင်းရှုပ်ခံ စဉ်းစားနေဖို့ မလိုဘူး။ ရှိတဲ့ တစ်မျိုးကို သုံးလိုက်ရုံပဲ။ မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုတော့ စဉ်းစာရပြီ။ မြန်မာလိုမှာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးပြောလေ့ရှိတဲ့ နာမ်စားက တော်တော်များများရှိတယ်။ ဘယ်လိုနာမ်စားသုံးရင် ကောင်းမလဲ။
ပထမဆုံး အပြင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးနေကြအတိုင်း "ကျွန်တော်" လို့ သုံးပြီးရေးရင် ကောင်မလားလို့စဉ်းစာမိတယ်။ ကျွန်မ့ နာမည်ကိုက မိန်မ နာမည်လို့ထင်စရာမရှိဖြစ်နေတော့ "ကျွန်တော်" လို့ သာ နမ်စားသုံးရေးလို့ ကတော့ ဘယ်သူမှ မိန်ကလေးလို့ ကို ထင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ လိုက်လည်းရှင်းပြ မနေချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကို ယောက်ျားလေးမှတ်ပြီး ပြောဆိုနေလို့ ၊ ကိုယ်က မရှင်းပြပဲနေလိုက်ပြန်ရင်လည်း မကောင်ဘူး။ ရှင်းလည်း မပြချင်ဘူး။ အရင်က ဒီလိုအထင်လွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြသနာတက်ဘူးသေးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ နာမည်၊ ကျွန်မ နဲ့ကျွန်မရဲ့ အရင်နှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း စကားပြောပုံတွေကြည့်ပြီး ၊ သူတို့ ဟာသူတို့ကျွန်မကို ယောက်ျားလေးလို့ ထင်ကြတယ်။ ကျွန်မကို လည်းဘာမှ မမေးကြပါဘူး။ နောက်တော့ အမှန်ကိုသိသွားရော၊ ကျွန်မက သူတို့ ကို ညာထားပါတယ်ဖြစ်ရော။ ခက်တယ်။ ဒီလိုထပ် အဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ ညာလို့ညာတယ် အပြောခံရတာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့်၊ မဟုတ်ပဲ အပြောတော့ မခံချင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း မိန်ုးကလေးပါလို့လိုက်ရှင်းမနေချင်တော့ "ကျွန်တော်" ဆိုတာကို သုံးပြီးမရေးသင့်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
"ကို" လို့ နာမ်စားသုံးရင် ရေးရင်ကောင်းမလား၊ စဉ်းစားကြည့်သေးတယ်။ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး။ မကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့ မသုံးဘူး။
"ငါ" ဆိုတာကြတော့ ရိုင်းသလိုပဲ။ တစ်ငါ ငါနဲ့ ဆို ... မဖြစ်ပါဘူး။ Personal Blog ဆိုပေမယ့် Blog ဆိုတာ လူတိုင်းလာဖတ်လို့ရတယ့်နေရာပဲ။ လာဖတ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ ပါနိုင်တာပဲ။ ရိုင်းသလို ဖြစ်နေမယ်၊ မကောင်ပါဘူး။ တကယ့်တော့ "ငါ" ဆို တာ ကိုယ့်နဲ့အရမ်း အရမ်းကို ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတာက လွဲရင်၊ တစ်ခြားအချိန်တွေမှာ မသုံးသင့်ဘူး ထင်တာပဲ။ ဒီတော့ "ငါ" ကိုလည်း သုံးဖို့ မသင့်တော်လို့ပယ်တယ်။
"သမီး" တို့ ၊ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ် သုံးပြောတာတို့က Blog ရေးတာမှာ လုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့ အရာတွေ။ ဟီး.....။ အဲ့ဒီလို နာမ်စားတွေသာ သုံးပြီး ရေးကြည့်ပါလား။ မသိတဲ့ သူတွေက ဒီတစ်ယောက် ပုံမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား၊ သိတဲ့ သူတွေ ဒီကောင်ရူးသွားရှာပြီ လို့အနိမ့်ဆုံးတော့ ထင်ကြမှာပဲ။
"ကျွန်ုပ်" ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ သူများတွေ ဘယ်လိုမြင်မလည်းတော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုတော့ "ကျွန်ုပ်" လို့သုံးပြီး ရေးမယ် စဉ်းစားမိတာနဲ့ တင် တော်တော် ရယ်ချင်နေပြီ။ ဟို လွတ်လပ်ရေးမရခင် ခေတ်ကို နောက်ခံထား ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက မြန်မာစကား ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ စကားပြောတာ သွားမြင်နေမိတယ်။ ဒါလည်း သုံးလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါဆို ဘာကျန်သေးလဲ။ "ကျွန်မ" ဆိုတာပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီ "ကျွန်မ" ဆိုတာ မွေးကထဲက ခုချိန်ထိ ကိုယ့်နဲ့ဆိုင်တယ် မထင်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးကြီး။ စာရေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါမှ မရေးဘူး၊ မပြောဘူးတဲ့ နာမ်စား။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွှန်မ စဉ်းစားလို့ရသလောက် ခုချိန်မှာ ဒီနာမ်စားက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ သူများတွေ မြန်မာလိုရေးတဲ့ Blog တွေမှာ အဲ့လိုသုံးရေးတာတွေ၊ စားရေးတာတွေ တွေ့ နေကြ၊ ဖတ်နေကြ ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ဟာကိုယ် ရေးမယ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အီလယ်လယ်ကြီး။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်ပင်ဖော်လေးကို မေးကြည့်တော့ သူက "ကျွန်မ" လို့ ပဲ နာမ်စားသုံးရေးပါတဲ့၊ သူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ပြီးပြီပေါ့။ ဟီး...။ ထပ်စဉ်းစားနေစရာ မလိုတော့ဘူး။ "ကျွန်မ" လို့ ပဲ နာမ်းစား သုံးရေးမယ်ဆိုပြီး မြန်မာလို Blog ကို စရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ မြန်မာလိုရေးတဲ့ Post တွေ စတင်ခါစကဆို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးမှုကို တော်တော်လေးခံ လိုက်ရပါသေးတယ်။ ကျန်တာကို ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ အတွက် ထူးဆန်းနေတာက ကျွန်မ Blog မှာရေးတဲ့ အသုံးအနုံး တွေကြောင့်ပါ။ ခုတောင် ဒီ Post ကို ဖတ်ပြီး "လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ" လို့ အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ထဲမှာ ပြောမိမှာက တစ်ယောက်၊ တဟီးဟီးရယ်နေ မှာက တစ်ယောက်ရှိ နေမှာကို ကြိုသိနေတယ်။
နည်းနည်း သတိထားမိရင် တွေ့ ကြမှာပါ။ ကျွန်မရဲ့ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ အစ ပိုင်းက Post တွေမှာဆို ကိုယ်ကိုကိုယ် သုံးထားတဲ့ နာမ်စားတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကို တွေ့ ကြမှာပါ။ ကျွန်မက ပင်ကိုကလည်း စာအရေးအသားကမကောင်း၊ Blog မှာရေးတာကို စာရေးတယ်လို့ သာခေါ်ချင်ရင်ခေါ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မက စကားပြောတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သာ ရေးလေ့ရှိတာဆိုတော့ အရေးအသားတွေက နည်းနည်းထောင့်တောင့်တောင့်နဲ့ ။ သူများတွေမပြောပါနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရေးထားတာ ကိုယ်ပြန်ဖတ်ရတာတောင် ဘဝင်မကျဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ Blog မှာ ရေးရင် အတတ်နိုင်ဆုံး မိန်ကလေး လေသန်နဲ့ရေးကြည့်နေတယ်။ ဘာရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး "ကျွန်မ" လို့ သုံးပြီး "ကျွန်တော်" လို့ သုံးရင်ပြောသလို ရေးနေတော့ ပို အဆင်မပြေဘူထင်လို့ ပါ။
မတော်တစ်ဆပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သေသေချာချာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ Blog ကို ဖတ်မိကြလို့စာဖတ်ရတာ အဆင်မပြေတာများရှိ ကြရင် သည်းခံကြပါ။ အရမ်းမဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ရင်လည်း comment မှာ ရေးထားခဲ့ပေးပါ။ ဘာဝေဖန်မှု့မျိုးမဆို ရေးထားခဲ့လို့ ရပါတယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ တော်သေးပြီ။
Posted by Nay Nay Naing at 7/15/2006 09:48:00 PM3comments
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ဖေဖေ။
ဒီနေ့ဖေဖေ ကျွန်မတို့ တွေကို သာမန်ထက်ပိုပြီး သတိရနေမှာပါ။ ကျွန်မတို့ ကလည်း ဖေဖေကို သတိရနေကြတာပါ။ ဒီနေ့ ဟာ ကျွန်မ့ချစ်သောဖေဖေရဲ့ မြန်မာလိုမွေးနေ့ ပါ။ ဒီနှစ် ဖေဖေရဲ့ မြန်မာလိုမွေးနေ့ က မွေးနေ့ နဲ့မွေးရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။ English လိုမွေးနေ့ ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Tuesday (11 July) ကပါ။ English လိုမွေးနေ့ နဲ့မြန်မာလို ဒီနေ့ မွေးနေ့ မှာ မေမေက ရန်ကုန်မှာ ဖေဖေမွေးနေ့ အတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ပေးနေသလို၊ ကျွန်မတို့ ကလည်းတတ်နိုင်သမျှ ဖေဖေရဲ့ မွေးနေ့ ကို ရည်စူးပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ နံနက်စောစော ဖေဖေ ကျွန်မကို ဖုန်းခေါ်တဲ့အတွက် ဖေဖေကို မွေနေ့ ဆုတောင်းပြောပြီး၊ ဖေဖေ အတွက် ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ပေးတယ်၊ လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဖေဖေက ကျွန်မကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီး၊ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။ ဖေ ဖုန်းခေါ်တဲ့ အတွက် အရမ်း အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျွန်မရဲ့ထုံစံ အတိုင်း ဖေဖေမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးဖြစ်ပေမယ့် ဖေဖေစီတော့ Email ပို့ ပြီးပြောဖို့မေ့နေဦးမှာပါ။ English လိုမွေးနေ့ တုန်းက မေမေက အတန်တန် သတိပေးရဲ့နဲ့ကျွန်မ ဖေဖေစီ Email ပို့ ဖို့ မေ့သွားခဲ့တယ်လေ။ ဒီနေ့တော့ ဖေဖေ့ မွေးနေ့ မှာ စကားပြောလိုက်ရတဲ့ အတွက် ဖေဖေလည်းစိတ်ချမ်းသာ၊ ကျွန်မလည်းကြည်နူး ကျေနပ်ရပါတယ်ရှင်။ နောက် အချိန်ရမှပဲ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မ့ဖေဖေအကြောင်းကို ရေးတော့မယ်။ ခုတော့ ဖေဖေအတွက် ဘုရားမှာ ဆုတောင်မေတ္တာပို့ လိုက်ပါအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/14/2006 09:00:00 PM3comments
Are You Mighty ?
Click HERE and you will see how mighty I am..
If you want to be mighty, you should try to change my name from the link to your name.
Thank YWN for sharing nice link.
Posted by Nay Nay Naing at 7/13/2006 12:30:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 7/11/2006 03:45:00 PM2comments
The verb google means "to use the Google search engine to obtain information on the Internet." or example, "Mary googled for Wikipedia references." Compare with grep.This new word arose from the tremendous popularity of the Google search engine. The American Dialect Society chose the verb google as the "most useful word of 2002." In July, 2006, the verb 'google' was officially added to the 11th edition of the Merriam-Webster Collegiate Dictionary, as well as to the Oxford English Dictionary.
Posted by Nay Nay Naing at 7/10/2006 03:44:00 PM0comments
ခုလေးတင် အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့chatting လုပ်ရင်း ဒီနေ့ ကစပြီး Taxi ခတွေ ဈေးတက်ပြီလို့သူက သတင်းပေးပါတယ်။ စိတ်ကြီးရယ် ညစ်ပါရဲ့။ သူကပြောသေးတယ် မကြာမှီ MRT ခတွေ၊ Bus ခတွေပါ တက်ဦးမှာတဲ့ရှင်။ ဒီမှာလည်း အရာရာဟာ ဈေးတက်နေပါလား။ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ အရင်ကဆို အိပ်ရာထနောက်ကျလည်း ဘာအရေးလဲ။ Taxi လေး ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး အလုပ်မှီအောင် သွားလို့ ရသေးတယ်။ အလုပ်နဲ့ ခုနေတဲ့အိမ်ကဝေးတော့ အရင်ဈေးနဲ့ တောင် အနည်းဆုံး ၁၂၊ ၁၃ လောက်ပေးရတာ။ ခုဈေးနဲ့ သာဆို အလုပ်ကို Taxi နဲ့ သွားတဲ့နေ့ဘာမှမစားပဲနေရမလိုဖြစ်နေမယ်။ စောစောအိပ်ပြီး၊ စောစောထနိုင်အောင်ပြန်ကျင့်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်သွားသွား အိမ်က အချိန်နီးမှ ကပ်ထွက်ပြီး Taxi နဲ့ သွားလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ကိုလည်း ပြင်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကုန်းဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့အပြိုင် ဝင်ငွေတိုးလာအောင်ပဲလုပ်ရင် ကောင်းမလား။ ငွေကို ရှိတိုင်းသုံးပြစ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကိုလည်းပြင်၊ ဝင်ငွေလည်းတိုးအောင်လုပ်၊ နှစ်ခုလုံးလုပ်မှ ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မျှတရုံလောက်ဖြစ်မှာ။
ဟိုနေ့ ကတင် အလုပ်မှာ Manager ကတောင်ငြီးနေတယ်။ မီတာခ တွေတက်လို့ တဲ့လေ။ အကုန် တက်နေတာပဲ၊ ခုအာဏာရနေတဲ့ အစိုးရကို မကြိုက်ဘူးတဲ့။ ဈေးတွေတက်လို့ တဲ့လေ။ ပြီးတော့ မေးသေးတယ် နင်တို့ တိုင်းပြည်မှာရော ဒီလိုပဲ ဈေးတွေတက်လား။ နင်တို့ ရော နင်တို့ ရဲ့လက်ရှိအစိုးရကိုကြိုက်လား တဲ့။ ဟီးးးးးး.... ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလည်း မသိဘူးဖြစ်သွားသေးတယ်။ သူကဆက်ပြောပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လူမျိုးကမှ လက်ရှိအာဏာရနေတဲ့ အစိုးရတွေကိုကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့သူထင်ပါတယ်တဲ့။ သူဟာသူမေး သူဟာသူဖြေသွားတော့ ကို ဖြေစရာ မလိုတော့ဘူပေါ့။ ဒါပဲကောင်းပါတယ်။
၁။ စောစောအိပ်၊ စောစောထ၊ အလုပ်ကို Taxi နဲ့မသွားရအောင်ကြိုးစားမှ
၂။ ချိန်းထားတာရှိလို့အပြင်သွားရမယ်ဆို၊ စောစောစီးစီး ပြင်ဆင်မှ
၃။ အလုပ်သွားရင် အိမ်မှာ မီ်း၊ Aircon ကိုသေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ပိတ်မှ
၄။ အိမ်ကို HandPhone ကနေ့တိုက်ရိုက်ဖုန်းမခေါ်မိအောင်နေရမယ်။ ဖုန်းကတ်နဲ့ ဆို ရန်ကုန်ကိုဖုန်းခေါ်ရတာ တော်တော်နဲ့ မရတော့ စိတ်ကမရှည်ဖြစ်လာပြီး တိုက်ရိုက်ပဲ ခေါ်မိနေတယ်။ ခုတော့ စိတ်ရှည်မှဖြစ်တော့မယ်
နောက်ဘာတွေချွေတာရဦမလဲ မသိဘူး။ ဟင်းးးးးး အတတ်နိုင်ဆုံး အထက်ကအချက်တွေတော့ ကြိုးစားလုပ်မှဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ရသမျှလခ ဘာမှမသုံးလိုက်ရပဲ ကုန်သွားနိုင်တယ်။
Source : CityCub
The flag down fare of ComfortDelGro's fleet of taxis - Comfort, CityCab and Yellow-Top - will be raised by 10 cents to $2.50 with effect from 6am, 10 July 2006.
Posted by Nay Nay Naing at 7/10/2006 11:29:00 AM5comments
2006 World Cup Champion - ITALY
ဒီနေ့ 2006 World Cup , Final ပြင်သစ် နဲ့ အီတလီ ပွဲမှာ အီတလီ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ အတွက် အိပ်ပျက်ခံ ကြည့်ရတာ တန်သွားတယ် ။ မဟုတ်လို့ အီတလီသာရှုံးခဲ့ရင် တနုံနုံနဲ အိပ်ပျော်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ အားကစား စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးပဲပြောပြော ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်းနိုင်ရင် အရမ်းမပျော်ပေမဲ့ ရှုံးရင်တော့ နေလိုထိုင်လို့ ကိုမကောင်းချင်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ရှုံးတဲ့သူတွေ ကိုကြည့်ရတာ၊ သူတို့ ဝမ်းနည်းနေတာကို မြင်ရတာလည်း စိတ်မကောင်ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုသ်ိလို့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာ အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် မကြည့်ပဲနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2002 World Cup တုန်ုးကလည်း အဲ့ဒီအချိန်က ကိုယ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံက ပွဲစဉ်တွေကြည့်ဖို့အချိန်ရော အခြေအနေရော အားလုံးကောင်းနေပေမယ့် လုံးဝမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘောလုံးပွဲလာလို့သူငယ်ချင်းတွေကြည့်နေပြီဆို ကိုယ့်အခန်းထဲမှာပဲနေပြီး စာဖတ်နေခဲ့တာ။ ပွဲပြီးမှ ဘယ်သူနိုင်လဲ မေးခဲ့တာပါ။ တစ်ပွဲမှကို မကြည့်ပဲနေခဲ့ပါဘူး။ ကြောင်တယ်ပဲပြောမလား။ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့ မေမေကမေးခဲ့တယ်။ ငါ့သမီး စာမကြည့်ပဲ ဘောလုံးပွဲပဲကြည့်နေသလားတဲ့။ ကျွန်မက လုံးဝ မကြည့်ုဖြစ်ဘူးပြောတော့ မေမေတောင် တော်တော်အံ့သြော သွားခဲ့တာ အမှတ်ရ မိတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့။ မေမေမယုံတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ ကျွန်မကလည်း ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆို TV ကကြည့်လို့ ရသမျှ ဘောလုံးပွဲတွေကို တစ်ပွဲမှ မလွတ်အောင်ကြည့်ခဲ့တာကို။ ခု 2006 World Cup မှာလည်း အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့မေမေက အသေအချာမှာပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲတွေကြီးပဲ အိပ်ရေးပျက်ခံကြည့်မနေနဲ့ တဲ့။ အိပ်ရေးပျက်ရင် အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့ ကြည့်လဲ ခဏပဲ ပွဲပြီးအောင်မကြည့်ဖြစ်ဘူး ပြောတာကို မယုံမကြည်နဲ့ ပါ။ ဟိုနေ့ က ဖေဖေ နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ ဖေဖေက လည်းမေးသေးတယ်။ သမီး နေကောင်းရဲ့လားတဲ့။ ကောင်းပါတယ်၊ ဘာလို့ မေးတာလဲပြန်မေးကြည့်တော့ ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်၊ အိပ်ရေးတွေပျက်၊ အလုပ်မှာပင်ပန်းနဲ့ငါ့သမီးနေမကောင်းမှာ စိုးရိမ်နေတာတဲ့လေ။ တကယ်ပါ ဒီ 2006 World Cup မှာ ဒီ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲတစ်ပွဲကိုပဲ ပွဲစ မှ ပွဲဆုံးတဲ့အထိ အစအဆုံး ပြီးအောင်ကြည့်ဖြစ်တာပါရှင်။ ခု လည်းခဏလောက်ပြန်အိပ်ဦးမှ၊ အလုပ်သွားရဦးမယ်လေ။ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ရတဲ့ အချိန်လေး အိပ်လိုက်ပါဦးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 7/10/2006 04:50:00 AM0comments
ဒီနေ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့ 
ကျွန်မ ဒီနေ့ ကဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဆိုတာကို ညနေစောင်းမှ သိတာပါ။ ဘာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှထူးထူးခြားခြားမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီနေ့Sunday ဖြစ်ပေမယ့် တစ်နေ့ လုံး ကျွန်မ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို Sunday ဆို ကျွှန်မ အနားယူလေ့ရှိပါတယ်။ အပြင်မသွားပဲ အိမ်မှာပဲ နေလေ့ရှိတယ်။ အပြင်ထွက်ရင် ပင်ပန်းလို့ ပါ။ နောက်နေ့Monday ဆို အလုပ်ကလည်း ပြန်သွားရတော့မှာလေ။ အိမ်မှာနေ၊ အဝတ်လျှော်၊ ရှင်းစရာရှိတာတွေရှင်း၊ ဖုန်းပြော၊ စာဖတ် ဒါပဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အိပ်ရာကလည်း စောစောထလေ့မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ တော့ စောစောထရပါတယ်။ ဖေဖေ အတွက် visa လျှောက်ဖို့လိုတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ ၊ ဓာတ်ပုံ Scan ကူးဖို့ ပါ။ မနက်ဖြန်မှာ လျှောက်လွှာသွားတင်ဖို့ ပါ။ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံးက အားမှာမဟုတ်လို့ စောစောထလုပ်ရတာပါ။ မနေ့ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ညီမ ဒီကိုရောက်ပါတယ်။ တစ်နေ့ညနေ (Friday) က ကျွန်မ့ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်ပြီး၊ သွားကြိုပေးပါ၊ လိုတာတွေ လုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုတာနဲ့မနေ့ ညနေက လေယာဉ်ကွင်းမှာ ကျွန်မ သွားကြိုပေးရပါသေးတယ်။ သူက မနေ့ ညကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်မတွေ အိမ်မှာ ခဏနေမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအိမ်ကို လိုက်ပို့ ပေးခဲ့ရတယ်လေ။ အဲ့ဒီအိမ်မှာ ကြာကြာနေရမှာ အားနာတဲ့ အတွက် ဒီနေ့ သူနေဖို့အိမ်လိုက်ရှာပေးပါဆိုလို့သွားရှာပေးရတာပါ။ ခုဏကမှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ည ၁၀နာရီလောက်ရှိနေပါပြီ။ လူလည်း နေမကောင်းချင် သလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံးမိုးတွေရွာနေတော့ မိုးရွာထဲ အိမ်ခန်းတွေလိုက်ကြည့် ခဲ့ရတယ်လေ။ ကျွှန်မက မိုးမိခံလို့မဖြစ်ပါဘူး။ မိုးမိလိုက်တာနဲ့ ဟိုနား နာသလိုလို ဒီနား နာလိုလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ပူစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မက တော်ရုံဆို ဖျားလေ့ မရှိပါဘူး။ ကိုတွေပူပြီး ဆေးခန်း သွားရလောက်အောင်ဖျား ခဲပါတယ်။ နေလို့ မကောင်း သလိုလိုကတော့ ခဏ ခဏ ဖြစ်တယ်။ အလုပ်က ခွင့်ယူရလောက်အောင်ကို တစ်ခါမှ မဖျား ဘူးပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ရေးနေရင်းက တောင်ရောက်လိုက် မြောက်ရောက်လိုက် ဖြစ်နေပြန်ပါပြီ။
ကဲ လူလည်း ပင်းပန်းနေပြီ၊ အနားလည်းယူသင့်ပြီ၊ မနက်ကြ အလုပ်သွားရဦးမယ်လေ။ နောက် အချိန်ရမှပဲ အိမ်ရှာတဲ့ အတွေ့ အကြုံလေး အမှတ်တရရေးရဦးမယ်။
ခုတော့ ဒီနေ့ တွေကြုံ ခဲ့ရတဲ့ ထဲက အတိုချုပ်မှတ်ထားရရင်
၁။ အ်ိမ်ခန်း တစ်ခန်းကို ဒီမှာ ချက်ချင်းရဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ကို မလွယ်ပါဘူး
၂။ တစ်ချို့ လူတွေက တော်တော်လေးကို စကားများပါလား (တစ်ခါမှ မတွေဘူး၊ မကြုံဘူးပဲနဲ့အခန်းငှါးဖို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာ၊ ၁၀ မိနစ်လောက် မရပ်မနား စကားပြောသွားတာပါ။ ကျွှန်မမှာ သူပြောတာ နားထောင်ပြီး တော်တော်မော သွားရပါတယ်)
၃။ တစ်ချို့ လူတွေ တော်တော်အကြွားသန်ပါလား။
၄။ တစ်ချို့ လူတွေ က တော်တော်ကို အမြတ်ကြီးစား၊ မသိတဲ့ သူကိုဆို ခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့ဝန်မလေးပါလား။ ( ကျွန်မက မနေ့ ကမှရောက်တာ အခန်းလိုချင်လို လို့ ပြောလိုက်တာကို၊ ညာလိုကလည်း မဖြစ်ဘူလေ၊ အိမ်ငှါးရင် Passport နဲ့ Visa ကော်ပီကူးပေးရတာလေ။ အဲဒီ နေမယ့် ကောင်မလေးမှာက ကျောင်းသားကတ်က လုပ်မှ မလုပ်ရသေးတာ။ နောက် တော့မှ ကျွန်မက ဒီနိုင်ငံမှာ နေတာကြာပြီမှန်း သိတော့မှ စကားပြောတဲ့ လေသံတွေက ပြောင်းကုန်ကြတာ။)
၅။ နောက်ဆို ကျွန်မလည်း တစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ်ဆို၊ မလုပ်ခင် အစစ အရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ဖြစ်တော့မယ်။ ခုရေးတွင်းတူး၊ ခုရေကြည်သောက်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။
ဒီလောက်ပါပဲ။ ရေးချင်တာတွေတော့ ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မရေးတော့ပါဘူး။
ဖေဖေ အတွက် Visa ကို online ကတင်ပြီးရင် အိပ်တော့မယ်။ ကောင်းသောညပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 7/10/2006 02:22:00 AM0comments
ဒါ ကိုရီးယားသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ။ Mg Albert ရဲ့Blogမှာတွေလို့သဘောကျတာနဲ့သူ့ စီကကူးယူခွင့်တောင်းပြီး ဒီမှာလာရေးထားလိုက်တာပါ ။ English လိုဘာဘာပြန်ထားတဲ့ Lyrics ကိုပဲကူးထားပါတယ် ။ ကိုရီးယား Lyrics ကိုတော့နားမလည်လို့ မကူးတော့ ပါဘူး ။
Posted by Nay Nay Naing at 7/07/2006 01:57:00 PM0comments
ဒီနေ့မနက် အလုပ်ရောက်တာနဲ့Company Update Meeting ရှိတယ်ဆိုပြီး Meeting Room ထဲကိုတန်းဝင်ရပါတယ် ။ Company Update Meeting ဆိုလို့ ဘာများလည်းလို့စဉ်းစားလိုက်ရတာ ။ ဒီ Company မှာ ဒီလို Meeting ခေါ်တာ တစ်ခါမှ မကြားဘူးလို့ ပါ ။ Company ရဲ့ Structure ကိုဘယ်က ဘယ်လိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရှင်းပြတာကြီးဖြစ်နေပါလား ။ အင်း .. ရှင်းပြတာတွေအရတော့အသစ်ပြောင်းသွားတဲ့ ပုံစံက တော်တော်ကောင်းပါတယ် ။ Porgramming စိတ်ဝင်းစားတဲ့ သူတွေအတွက် Project Development (Custom and InHouse) မှာ လုပ်မလား ၊ Positions ကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့ ။ Customer နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ရတာ စိတ်ဝင်းစားတဲ့ သူတွေ အတွက် Business Management ပိုင်းမှာလုပ်မလား ၊ Technical ပိုင်း အားသန်တဲ့ သူတွေအတွက် Technical Analyst ပိုင်းလုပ်မှာ လုပ်ချင်လား ။ စုံနေတာပါပဲ ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာပေါ် မူတည်ပြီး ရာထူးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ လူဆိုတာ ကိုစိတ်ဝင်စားတာကို လုပ်ရမှ ပျော်မှာ ၊ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် .. ဒီလို ဒီလိုတွေပြောင်းလည်း လိုက်ရတာဖြစ်ပါသည်ပေါ့ ။ အင်း.... အပြောကတော့ တကယ်ကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လုပ်ဖို့ လိုနေတဲ့ အဓိကဟာကို အရင်မလုပ်ဘူး ။ ဘယ်လိုလူမျိုးက လခ မှန်မှန် မရတဲ့ အလုပ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြိုးကြိုးစားစား တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ချင်ကြပါ့ မလဲ ။ ခုတော့မရောင်ရာဆီလူး ဆိုတဲ့ အတိုင်း လိုနေတာတွေ အရင်မလုပ် ၊ မလိုသေးတဲ့နေရာကို လာ ဆီလူးပေးပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးနေသလိုဖြစ်နေတယ် ။ ရာထူး အသစ်တွေ ၊ နေရာ အသစ်တွေ ဖန်တီးပြီး ဒီနေရာတွေရချင်ရင် နင်တို့ ကြိုးစားကြ လာလုပ်နေတယ် ။ တစ်ခုရှိသေးတယ် ရာထူးတွေသာပြောတာ လခတွေအကြောင်းတော့ လုံးဝမပြောသွားဘူး ။ ဒီကလူတွေကို ငတုံး ၊ ငအ တွေများ ထင်နေလားမသိပါဘူးရှင် ။ ဒါတွေပြောနေမယ့် အစား လခ မှန်မှန်လေးပေး ၊ ၆ လတစ်ခါ Performance Review လေးလုပ် ။ တော်တဲ့သူ ၊ ကြိုးစားတဲ့သူကို သူနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ လခတိုးပေး ၊ ရာထူးတိုးပေး လုပ်ပါလား ။ ခုတော့ အလိုအလျောက် လခတိုးပေးတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြားဘူး ပါဘူး ။ အလုပ်က ထွက်စာတင်တဲ့ သူတွေမှပဲ လခတိုးပေးပါ့မယ် လုပ်တော့တယ် ။ ရှိသေးတယ် လကုန်ပြီဆို တစ်လစာ Time Log တင်ခိုင်းပါပြီ ။ တစ်လလုံး ဘယ်နေ့ တွေ မှာ ဘယ်နှစ်နာရီ ဘာတွေလုပ်ပါတယ် ၊ ဘယ်နေ့ တွေက ခွင့်ယူပါတယ် ဆိုတာတွေကို သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံမှာဖြည့်Project Manager ကိုပေး ၊ Project Manager ကလက်မှတ်ထိုးပြီးရင် HR ကိုပေးရပါတယ် ။ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ အချိန်ပိုတွေလုပ်ထားပါစေ ၊ Sunday တွေ Public Holiday တွေမှာလုပ်ထားပါဦး လခကတော့ ဘယ်တော့မှ ပိုမရပါဘူး ။ Medical Ceftificate (MC) မပြပဲ ခွင့်ယူထားရင်တော့ လခက ဖြတ်ပါတယ် ။ MC ပြပြီးခွင့်ယူထားရင် အမှန်ဆို ဆေးဖိုးကျသင့်ငွေကို Company က ပြန်ပေးရမှာပါ ။ ဒီ Company မှာတော့ တစ်ခါမှ ပြန်မရဘူးသေးပါဘူး ။ အလုပ်နဲ့Customer တွေစီသွားရ ရင် Taxi နဲ့ သွားရပါတယ် ။ အချိန်ကုန်မှာဆိုးလို့ Taxi စီးခိုင်းပါတယ် ။ ကျသင့်ငွေကို ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ အရင်ပေးထားရတာပေါ့ ။ လကုန်ရင် Slips တွေတင်ရတယ် ။ နောက်လ လခထုတ်ရင် အဲ့ဒီငွေတွေ ပြန်ရ ရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လည်း ခုထိတော့ တစ်ခါမှ ပြန်မရသေးပါဘူး ။ တစ်ချို့ ဆို အလုပ်သာထွက်သွားရော ရစရာရှိတာတွေ အကုန်ရ မသွားပါဘူး ။ ဘယ်တော့ပေးမှာလည်းမေးတော့ သူတို့ ခုချိန်မှာ လခ မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားပေးစရာတွေကို Processing မလုပ်သေးပါဘူး ။ Processing လုပ်ရင် ပေးပါမယ်တဲ့ ။ ဘယ်တော့ Processing လုပ်မှာလည်းဆိုတော့ မသိသေးပါဘူးတဲ့ရှင် ။ ဒီလို အခြေအနေတွေရှိနေတာတဲ့ဟာကို အပိုတွေလာပြောနေလို့ စိတ်ထဲကသိကအောင့် ဖြစ်မိတာပါ ။ ကျွန်မလေ ပြောလိုက်ချင်တယ် "တကယ်လိုအပ်နေတာတွေလုပ်ကြပါ ။ Paper ထဲကဟာတွေ Paper ထဲမှာချိန်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်မနေကြပါနဲ့ " လို့ ။ အခုတော့ ပြောလို့ မဖြစ်သေးဘူး ။ တော်ကြာ ရစရာရှိတဲ့ လခလေးမရ ဖြစ်သွားဦးမယ် ။ ထွက်စာတင်ပြီးမှ ပြောဖြစ်အောင် ပြောလိုက်မယ် ။
Posted by Nay Nay Naing at 7/06/2006 03:02:00 PM2comments
ဒီနေ့ ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပါ ။ အဲ့ဒီကလူတွေအတွက်တော့ အလုပ် လုပ်ဖို့ မလို ရှားရှားပါးပါးနားခွင့်ရတဲ့ အားလပ်ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်မှာပါ ။ ကျွန်မကအတွက်တော့
ဒီနေ့ထုံးစံအတိုင်း အလုပ် သွားရတယ်.
ဒီနေ့အလုပ်ကိုအသွား လမ်းမှာ အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ်
ဒီနေ့လူတွေလိုက်နာရမယ့် ကျင်ဝတ်ကိုမလိုက်နာတဲ့ ၊ မသိတတ်တဲ့ သူတွေကြောင့် စိတ်တိုရတယ်
ဒီနေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဝေဖန်မှု့ မျိုးနဲ့ ဝေဖန်တယ်
ဒီနေ့အီတလီက ဂျာမဏီကို ၂းဝ နဲ့ နိုင်တယ်
ဒီနေ့သူနေမကောင်းဖြစ်နေတယ် (သူမြန်မြန်နေကောင်းပါစေ)
Posted by Nay Nay Naing at 7/05/2006 09:47:00 AM3comments
Always Gave 100% At Work
Posted by Nay Nay Naing at 7/04/2006 07:06:00 AM0comments
ဒီနေ့ အချိန်လေးနည်းနည်းရတာနဲ့ Java Interview Questions and Answers လေးတွေလိုက်ရှာ ကြည့်တာ တော်တော်များများတွေ့ ရပါတယ် ။ ကျွန်မ ဖတ်ကြည့်မိသလောက်တော့ တော်တော်လေးကို သဘောကျမိတယ် ။ အလုပ် Interview အတွက်မှ မဟုတ်ပါဘူး Java အကြောင်းကို ပိုသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်မှာပါ ။ တစ်ချို site တွေမှာ java တင်မက ဘူး တစ်ခြား programming တွေအတွက်ပါ Interview Question and Answer တွေရှိပါတယ် ။
1. Java Interview Question - Srcsinc
2. All App Lab (Java , Ant, Struts, EJB , Hibernate and More..)
3. JavaCamp (Java and Java Related Programmings)
4. Secrets Of The Masters: Core Java Interview Questions
5. IT Top Interview Questions (Java, J2SE, J2EE, J2ME , And other Porgrammings)
6. Geek Interviews ( Java and Other Programmings )
7. IndicThreds (Java, J2EE Portal)
8. Java Galaxy
9. Rose India (Core Java and Other Programmings)
10. Java Certificate Interview Question
11. Clean Interview (Java, JSP, EJB and other Programmings)
12. Java, JSP, Servlets, J2EE Interview Question - Agrish
13. Think Java (Java, Struts, EJB) Interview Question
14. Smart Data Processing
15 . Java Question - Tripod
Posted by Nay Nay Naing at 7/03/2006 02:51:00 PM2comments
အစဉ်မပြေဘူး။ ခေါင်းရှုပ် နေ တယ်။
ဘာလို့ လဲလို့ မမေးပါနဲ့ ။ မေးစရာမလို သလို ၊ အားပေးစရာလည်း မလိုဘူး....
Posted by Nay Nay Naing at 7/02/2006 01:12:00 PM0comments
And all your love to cover me
So all the world can see I have nothing
I am nothing, I am nothing, without you
Posted by Nay Nay Naing at 7/01/2006 08:36:00 PM0comments
စဉ်းစားပါဦး - စိုင်းထီးဆိုင်
တစ်ခါငိုရရင် ၊ တစ်ခါမကပြုံးခဲ့ဘူးတာလည်း မမေ့လိုက်နဲ့ ဦး
လူဆိုတာ ကိုယ့် အကြောင်းနဲ့ ကိုယ် ၊ နေရာတိုင်း တစ်ယောက်အကြိုက် မလိုက်နိုင်ဘူး
မလွယ်တာတွေ့ ရင် ပိုခက်တဲ့တစ်ခြားဘဝတွေကို ငဲ့ကြည့်ပါဦး
လူဆိုတာ ကိုယ်စွမ်းသလောက်သာ ၊ အရာရာတိုင်းတော့ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး
Posted by Nay Nay Naing at 7/01/2006 12:45:00 PM0comments